ဒီလိုပုံလေးတွေကြောင့် ပြည်တွင်း ဂျာနယ် (၃)စောင် အပိတ်ခံရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Entertainment » ဒီလိုပုံလေးတွေကြောင့် ပြည်တွင်း ဂျာနယ် (၃)စောင် အပိတ်ခံရ
ဒီလိုပုံလေးတွေကြောင့် ပြည်တွင်း ဂျာနယ် (၃)စောင် အပိတ်ခံရ
Posted by နွယ်ပင် on Jan 31, 2011 in Entertainment, News | 18 comments
Microfinance Empowers ကလဲ အမြဲနှောက်ယှက်နေတာပဲဗျာ
ပြောကြပါနဲ့လေ ဒီပုံလောက်ကတော့ အမြင်မရိုင်းတော့ပါဘူး ကိုရီးယားကားတွေ ကြည့်ထားလို့ ရိုးနေပြီနော့
မင်းသမီးတွေရော.. မော်ဒယ်လ်တွေရော.. လုံလုံခြုံခြုံမ၀တ်ကြတော့တာကြာပါပြီ
တခြားသူတွေတော့ သိပ်လှတယ် ထင်မလားမသိဘူး
ကိုယ်ကတော့ အရမ်းစိတ်ပျက်ပါတယ်။ ဘယ်အရာမဆို တော်ရုံသင့်ရုံပဲကောင်းပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုလေး နည်းနည်းတော့ ထိန်းစေချင်ပါတယ်။ခေတ်ကိုအမှီလိုက်ချင်ရင်လည်း ဖက်ရှင်တစ်ခုတင်မဟုတ်ဘဲ တခြားကောင်းကွက်လေးတွေကိုလည်းအမှီလိုက်ပါလို့ …
၀ုတ်ပါဘူး .. နိုင်ငံခြားသားတွေ တွေ့သွားရင် မြန်မာတွေ သိက္ခာကျမှာစိုးလို့နဲ့ တူပါတယ် .. (စိတ်ပြေသွားအောင် တွေးကြည့်တာ)
FTV က Fashion တွေကို ကြည့်ပြီး စိတ်ကူးလေးနဲ့ အိမ်မှာ ချုပ်ထားတာ… ဒီလိုပွဲမှာမှ ဒါမျိုးမ၀တ်ရရင် တစ်သက်လုံး မ၀တ်လိုက်ရမှာ စိုးတယ်လေ… အဟိ… (နောက်တာနော်)
၀မ်းသာတယ် ။ ( ……. ဆက်ရေးရင် ဟို ဧရာဝတီကောင်က လိုက်ဟက်နေဦးမယ် ။………)
၀တ်တဲ့သူတွေကျတော့ မပိတ်ဘူးလား……. ဒါကျတော့ မတရားဘူးနော်………..
သူတို့က ၀တ်တာတော့ဟုတ်ပါတယ် .. ဘော်ဒီဂတ်တွေ နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့သွားတာ …။ စိတ်နဲ့ပဲပြစ်မှားလို့ရမယ် ။ အပြင်က ကောင်မလေးတွေက တိုနန့်နန့်တွေဝတ်ပြီး ဘတ်စ်ကားတိုးစီးတာ…..ညအချိန်မတော်အဲ့လိုဝတ်လမ်းသလား … အဲ့လိုကွာပါတယ်..။
အခုတင်ထားပုံက တော်သေးတယ် အဲ့ပွဲမှာ အေးမြတ်သူ နဲ့ သတို့သမီးအိန္ဒြာကျော်ဇင် ကတော်တော်ဆိုးဆိုးပဲ မော်နီတာဂျာနယ်0ယ်ဖတ်လို့ရရင် အဲ့ထဲ မှာပါတယ် ဒီမှာက Scan ကဖတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေလို့ မဟုတ်ရင် ရွာသူရွာသား တွေကြည့်လို့ရအောင် တင်ပေးချင်တာ …
နွယ်ပင်က အသံနဲ့ အနံ့ပဲပေးပြီး ဟတ်ကော့ဖြစ်အောင် ထားခဲ့တယ် .. ဘာကြောင့် ပိတ်ခံရတယ် ဆိုတာ မဖတ်ရတဲ့သူတွေ သိအောင် တင်ပေးပါလား ..
မမမိုးသီတာရေ ….နွယ်ပင်ကြားတာကတော့ မော်နီတာဂျာနယ်က ဦးမြတ်ခိုင်လုပ်တာဆိုတော့ သူက စာပေစီစစ်ရေးနဲ့ သိပ်ပိုင်မဟုတ်လား အဲတော့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် dinner ပွဲ့ကပုံတွေကို ဆင်ဆာတောင်မတင်ပဲ ပိုင်တယ်ဆိုပြီး မဖုံးမအုပ်ပဲ စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြလိုက်လို့ပါတဲ့ ကျန်တဲ့ နှစ်စောင်ကတော့ ဆင်ဆာက ဖြုတ်ခိုင်းတာကို မဖြုတ် အုပ်ခုပ်တိုင်းကိုမအုပ်ပဲ အရှိကိုအရှိတိုင်းဖော်ပြလိုက်လို့တဲ့ ..
တိဝူးလား ။ မင်းသမီးကြောင့်ပိတ်တာ မဟုတ်ဘူးလေ ။ဆင်ဆာ မတင်လို ပိတ်တာပါတဲ့ရှင့်။